रूपरेखाको पूर्वदृश्य प्रदर्शन गर्नुहोस्.
रोज्नुहोस्ढाँचा - बेर्नुहोस् - कन्टोउर सम्पादन गर्नुहोस्
चयन गरिएको वस्तुमा रूपरेखा लागू गर्नुहोस्.
अनुकूल रूपरेखा मेट्नुहोस्. यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, र पूर्वदृश्य क्षेत्रमा क्लिक गर्नुहोस्.
चयन मोड परिवर्तन गर्नुहोस्, कि तपाईँंले रूपरेखा चयन गर्न सक्नुहुन्छ.
आयात रूपरेखा चित्राङ्कन गर्नुहोस् जहाँ तपाईँंले वस्तु पूर्वदृश्यमा तान्नु भयो. बर्ग चित्र कोर्नका लागि, सिफ्ट होल्ड गरेर राख्नुहोस् तपाईँंले तानेको बेला.
बिन्दुहरू सम्पादन गर्नुहोस्
मानौं तपाईँंले रूपरेखाको आकार परिवर्तन गर्नुभयो. यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, र रूपरेखाको ह्यान्डलहरू तान्नुहोस्.
मानौं तपाईँंले रूपरेखाको ह्यान्डलहरू रूपरेखाको आकार परिवर्तन गर्न तान्नुभयो.
ह्यान्डल घुसाउनुहोस् जुन तपाईँंले रूपरेखाको आकार परिवर्तन गर्न तान्नुहुन्छ. यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, र रूपरेखाको रूपरेखामा परिवर्तन गर्नुहोस्.
रूपरेखाको रूपरेखाबाट बिन्दु मेटाउनुहोस्. यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, र बिन्दु क्लिक गर्नुहोस् जुन तपाईँं मेटाउन चाहनुहुन्छ.
तपाईँंले सम्पादन गर्न सक्नुहुने रूपरेखाको वरिपरि स्वत: चित्राङ्कन गर्नुहोस्.
अन्तिम कार्य उल्टो पार्नुहोस्.
अन्तिम रेडु आदेशको कार्यउल्टो पार्नुहोस्.
पाठ वस्तुहरू वरिपरि बेर्दा
Title is: रुपरेखा सम्पादन